रमेश प्रसाईंसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध छैन हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्छौं भनिन् कल्पना दाहालले…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर २१, २०७७ आइतबार 4
काठमाडौं : पब्लिक स्पि’कर रमेश प्रसाईं र समाजसेवी नन्दा सिंहबीच हुने वि’वाहको मिति सार्वजनिक भएसँगै गायिका कल्पना दाहाललाई जोडेर विभिन्न प्रति’क्रिया सार्वजनिक भएका छन्। जुन प्रतिक्रि’याले रमेश र कल्पना दुवै दुःखी भएका छन्।
लामो समयदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई रमेश र नन्दाले वि’वाहमा परी’णत गर्न लागेका हुन्। तर, गायिका कल्पनालाई रमेशले धोका दिएको भनेर सार्वजनिक भएका प्रति’क्रियाले रमेश र कल्पना दुवै दुःखी भएका हुन् । उनीहरुले आफूहरुबीच प्रेम सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।
नन्दासँगको प्रेम सम्बन्धबारे जानकार कल्पनाले रमेशसँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारिन्। हामीहरुबीच वि’वाह नै गर्ने खालको प्रेम सम्बन्ध छैन, क्या’नडानेपालसँग कल्पनाले भनिन्, मैले दाइ, प्रशंसकको रुपमा सम्मान गर्छु, त्यही किसिम माया, स’द्भावमात्रै हो, दर्शकले सोच्नु भएको जस्तो प्रेम सम्बन्ध छैन।
कल्पनाको तर्कमा रमेश पनि सहमत छन्। उनले कल्पनासँग प्रेम सम्बन्ध नरहेको स्प’ष्ट पारे। कल्पनाको कलाकारिताको सम्मान गरेको हुँ, प्रेम गरेको होइन, यसबारे दर्शक र शुभेच्छुक भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु, रमेशले क्या’नडानेपालसँग भने।
केही समय अघि सँगै दोहोरी गीत गाएपछि रमेश र कल्पनाको प्रेम सम्बन्ध रहेको र उनीहरुबीच विवाह हुने अफवाह फैलिँदै आएको थियो । जसबाट आम दर्शक र उनीहरुका शुभेच्छुकमा भ्रम सृजना भएको थियो। तर, मंगलबार रमेश र नन्दाबीच हुने विवाहको मिति सार्वजनिक भएसँगै रमेशवि’रुद्ध विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्।
तर, यस्ता प्रतिक्रियालाई रमेश र कल्पना दुवैले खण्डन गरेका हुन् । नन्दासँगको प्रेम सम्बन्धमा रमेश रहेको जानकार रहेकी कल्पनाले आफूहरुबीच प्रेम सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
जसरी चर्चा भयो, त्यस किसिमको रमेश दाइसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध छैन, उनले भनिन्, रमेश र नन्दाबीचको वि’वाहमा हामीहरु पनि गएर बधाई र शुभकामना दिन्छौँ।
रमेशसँग राम्रो मित्रता रहेको र एकअर्काको शुभ-चिन्तक रहेको बताएकी कल्पनाले आफ्ना दर्शक र शुभ’चिन्तकहरुलाई अफवाह र भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गरेकी छन्। यस्तै रमेशले पनि कल्पनासँग प्रेम सम्बन्ध नरहेको र मित्रवत् सम्बन्ध भने रहेको जा’नकारी दिए।
कल्पनाको दोहोरी गाउने पेसा हो, दोहोरी गाउँदा माया प्रेमका कुरा हुनु स्वभाविकै हो, रमेशले भने, तर, गीत गाइएजस्तै वास्तविक जीवनमा हुँदैन। यस कारण कल्पना र मेरो प्रेम सम्बन्ध थिएन। नन्दासँग मेरो सम्ब’न्धबारे कल्पना जानकार थिइन् ।
कल्पना र आफूले एकअर्कालाई कहिल्यै प्रेम प्रस्तावसमेत नगरेको रमेशको भनाइ छ। तर, जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा कल्पना र रमेशलाई जोडेर आइरहेका अफवाहले दुवैजना दुःखी भएका छन्। रमेश र नन्दाको यही मंसिर २२ गते वि’वाह हुने कार्यक्रम छ।
Prevकहाँ पुग्यो विद्यासुन्दरको प्रतिवद्धता ? कहिले आउँछ काठमाण्डौमा मोनोरेल ?
Nextहाम्रो करबाट पालिने सांसद र प्रदेशहरु अति धेरै भयो, यो क’टौती नगरेसम्म देशको विकाश हुदैन डा.रुईत…चित्तबुझे सेयर गरौं गर्नुहोस ।